Qoyska Idirs Mukhtar oo baaq u diray agaasimaha dacwad oogidda – The Voice of Northeastern Kenya
Qoyska wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee ismaamulka Garissa Idiris Aadan Mukhtaar ayaa baaq u diray waaxda dacwad soo oogidda dalka iyo sido kale laanta qaabilsan dembi baarista.
Aabaha dhalay Idiris Aadan Mukhtar ayaa sheegay inaysan fahmi karin sababta dowlada ay xoogga u saartay labadii gabdhood ee la dilay ee kala ahaa Sharon Otieno iyo Monica Kimani sidaasi si la mid ahna aysan wax uga qaban toogasho xili hore Idiris loogu geystay xaafadda Kileleshwa ee magaaladatani Nairobi.
Qareenka qoyskan matalaya Charles Kanjama ayaa dhanka kale sheegay inuu jiro dareen ay qabaan xubnaha qoyska oo ah inuu jiro qaab kale oo la doonayo in lagu xalliyo dhibka dhacay taasina aysan ku qanacsanayn.
Waxay waaxyaha dacwad oogidda iyo dembi baarista ka codsadeen inay ka dhabeyaan wax ka qabashada culeyska la soo darsay iyo murugada haysata.
← DHAGEYSO Matiango oo farin u diray aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada kale ee dalka
Madaxweynaha dalka oo ka qeyb galay shir ku saabsan tacliinta fasalada hoose →